Maraykanka oo qaramada midoobe ku wargaliyay ka bixitaankooda heshiiska ibadalka cimilada - BBC News Somali
Maraykanka oo qaramada midoobe ku wargaliyay ka bixitaankooda heshiiska ibadalka cimilada
5 Agoosto 2017
Image caption Go'aanka Trump waxa uu keenay canbaarayn caalami ah
Maamulka madaxwayne Trump ayaa so saaray qoraalkii ugu horeeyay oo ay ku doonayaan in ay ku muujinayaan in si rasmi ah ay uga baxaan heshiiskii isbadaka cimilada ee Paris oo la saxiixay 2015.
Qoraalkani oo loo gudbiyay qaramaada midoobe ayaa waxa lagu sheegay in xukuumada Washinton ay sii wadi doonto ka qaybgalka shirarka looga hadlayo isbadalka cimilada tan iyo inta ay Maraykanka soo gabagabaynayaan geedi socodka ka bixitaanak heshiiska.
Madaxwayne Donald Trump ayaa la kulmay canbaarayn caalami ah markii ugu horeysay oo uu bishii June ku dhawaaqo in uu doonayo in uu ka baxo heshiiska isbadalka cimilada.
Waxa uu sheegay in heshiiskani uu yahay mid Maraykanka lagu ciqaabayo islmarkana uu galaafanayo shaqooyiinka malaayin dadka Maraykanka.
Ku dhawaaqida ay Maraykanka sida rasmiga h ugu dhawaaqeen in ay ka baxayaan heshiiska ayaa ah calaamad muujinaysa in ka bixitaanka Maraykanka ee heshiiskan ay qaadan karto ilaa 2019.
Geedi socodka ka bixitaanka heshiiska ayaa ka dib qaadan doona sanad kale ,taasi oo ay micnaheedu tahay in aan la dhamaystiri Karin ilaa laga gaaro 2020 ka dib todobaadyo doorashada madaxwaynanimada Maraykanka.
Shiinaha iyo Maraykanka oo meelmariyay heshiiskii cimilada ee Paris
Trump oo bidhaamiyay in uu dib u eegayo isbadalka cimilada
Image caption Heshiiska Paris ayaa loo arkaa in uu muhim u yahay dagaalka ka dhanka ah isbadalka cimilada
Hadii madaxwayne cusub ay noqoto in ay soo doortaan dadka Maraykanka sanada 2020 ayaa waxa uu go'aansan karaa in uu dib ugu biiro heshiiska isbdalka cimilada ee Paris.
"Maant Maraykanka waxa ay u gudbiyeen qaramada midoobe qoraal ah rabitaanka Maraykanka ay ku doonayaan in ay uga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan heshiiskii Paris," waxaa sidaasi lagu sheegay bayaan ay Maraykanka soo saareen.
Go'aanka madaxwayne Trump ee ka bixitaanka heshiiska isbadalka cimilada ayaa waxa ku kala qaybsamay wadamada xubnaha ka ah heshiiskan.